Mmadụ ise nwụrụ ka ndị uweojii gbochiri mwakpo ọzọ wakporo ụlọ ọrụ iwu dị n'Imo
[FILES] Ndị uwe ojii Nigeria
N’ụbọchị Sọnde, ndị uwe ojii Imo gbagburu mbọ ọzọ ndị ọgba aghara wakporo isi ụlọ ọrụ iwu ahụ dị na Owerri, wee gbuo mmadụ ise n’ime ndị mwakpo ahụ n’agha egbe.
Ọzọkwa, iwu ahụ kwuputara na ha amalitela nyocha miri emi banyere ọnọdụ metụtara ọnwụ Uguchi Unachukwu, onye laghachitere na Germany na May 31 ma boro ya na e gburu ya.
Na nkwupụta nke onye na-ekwuchitere iwu ahụ, bụ SP Bala Alkana, dere, Kọmitii nke ndị uwe ojii na Imo, CP Abutu Yaro, kwadoro mwakpo dara ada.
Yaro kwuru na mmadụ ise n'ime ndị ọgbaghara ahụ gburu n'ọgbọ agha, ebe ndị ọzọ gbagburu ọnya mgbọ.
“Hoodlums na-eme ka ndị oji egbe a na-amaghị ama nwara ịwakpo isi ụlọ ọrụ ndị uwe ojii n'ụtụtụ a mana e meriri ha nke ọma.
“Ha nwara ịnweta isi ụlọ ọrụ ndị uwe ojii site na ọrụ ọrụ okirikiri nke metụtara gburugburu Avan Nursery na Primary School mana ha zutere oke iwe.
Ha batara na ọcha Hummer. Ise nke hoodlums ahụ nwụrụ na ọtụtụ ndị ọzọ merụrụ ahụ n'oge mgbanwu ọkụ.
“Enwetara ụgbọ ala Hummer ahụ na egbe anọ nke Ak47 nke ndị ohi uwe ojii zuru n’ohi n’oge ha wakporo ọdụ ha n’oge na-adịbeghị anya, ebe a na-ezipụ ndị uwe ojii ka ha jide ndị agha ahụ na-agba ọsọ.
Banyere ọnwụ Unachukwu, kọmishọna ndị uwe ojii kwuru na ndị ọrụ iwu ga-enyocha ọnọdụ gbara ya gburugburu. Dị ka News Lọ ọrụ Agency nke Nigeria (NAN), gbagburu Unachukwu mgbe ọ na-aga ọdụ ụgbọ elu Sam Mbakwe iji nwete ụgbọ elu laghachi Germany.
E boro ya ebubo na ndị nwoke yi uwe ndị agha gburu nwunye ya na ụmụ ya abụọ gburu ya.
Ndị CP kwere nkwa ịgbaga ogologo ọ bụla iji dozie ihe ahụ merenụ.
“Na May 31, 2021, n’ihe dị ka elekere 0804, ndị ọrụ ekwenyere na ha bụ ndị otu ndị agha Nigerian Air Force’s 211 Regiment gbara ndị nwụrụ anwụ ebubo na ha gburu onye ahụ nwụrụ anwụ.
“Ekwenyere na onye ahụ nwụrụ anwụ nọ na-aga ụgbọ elu na-aga Lagos. Dịka otu onye si dị ndụ, otu n'ime ndị ọrụ Air Force gbagburu ụgbọ ala Unachukwu mgbe ọ kwụsịrị ịkwụsị ebe ndị ọrụ ụgbọelu na-enyocha ụgbọelu ka etinyere ya.
“Ndị ọrụ ụgbọ elu nke ndị agha nọ n’ọnụ ụzọ mgbapụta, bụ ndị nọrịrị na nche dị elu na-esochi ogbugbu a na-adịbeghị anya nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị a ma ama n’otu mpaghara ahụ, gbochiri ngwa ngwa Mercedes Benz na-eru nso.
“Nchọpụta ndị emere gosiri na ndị ọrụ gbatụrụ ụgbọ ala ahụ ma gwa onye ọkwọ ụgbọ ahụ ka ọ wụga n’akụkụ okporo ụzọ maka nyocha, mana onye ọkwọ ụgbọ ala ahụ, onye mbido jiri nwayọ nwayọ wee mee ka ọ na-adafe, gbapụrụ na mberede.
“Dị ka ndị agha ụgbọ elu si kwuo, na-enyo enyo banyere njem ndị ọrụ ụgbọ ahụ ahụ kwuru na ọdụ ụgbọ elu mba ụwa, ha gbalịrị iwepu ụgbọala ahụ, ma mgbe ọ kwụsịrị, ndị ọrụ ahụ chịkọtara ya ma nye ndị bi na ya iwu.
"N'oge a, otu nwanyị nọ n'ụgbọala ahụ kwuru na onye ọkwọ ụgbọ ahụ bụ di ya nakwa na ọ na-agba ọsọ ọsọ iji nweta ụgbọ elu ya.
“Otú ọ dị, ndị agha Air Force gbagara ya n'ụlọ ọgwụ maka nlekọta ahụike, ebe ndị dọkịta nọ n'ọrụ mere mgbalị siri ike iji mee ka ọ kwụsie ike, mana ọ nwụrụ mgbe ụbọchị ahụ gasịrị n'ihe dị ka awa 1900.
“Anyị na-achọ obi iru ala ma na-emesi ndị ezinụlọ onye ahụ nwụrụ anwụ na ndị enyi ya obi ike na ọ nweghị nkume ọ ga-ahapụ nke na-enweghị ntụpọ iji chọpụta ọnọdụ gbara ya gburugburu,” ka nkwupụta ahụ gụrụ.
Shehu Sani kwuru na oku Buhari kpọrọ n’isi ụlọ ọrụ US Africa Command ga-eduga na nwetaghachị April 28, 2021
Amazon mepere isi ulo oru Africa na South Africa April 20, 2021
Isi ụlọ ọrụ nchekwa ezigarala ndị agha ịdọ aka na ntị megide ịkwatu ọchịchị Buhari Nwere ike 4, 2021
Boko Haram weghara isi ụlọ ọrụ ndị agha ahụ, gbuo ọchịagha na ndị soja iri atọ. April 26, 2021
N’agha egbe ha na ndị agha Naịjirịa, e gburu ndị agha Boko Haram si mba ofesi Nwere ike 4, 2021
Tags:kọmịshọna ndị uwe ojii, ụgbọ mmiri hummer, ozi ọma, Nkwerre, sam mbakwe